MRTV4မှ အနှေးယာဉ် စည်းကမ်း ပညာပေးရိုက်ချက် …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » MRTV4မှ အနှေးယာဉ် စည်းကမ်း ပညာပေးရိုက်ချက် ….
MRTV4မှ အနှေးယာဉ် စည်းကမ်း ပညာပေးရိုက်ချက် ….
Posted by fatty on Aug 11, 2011 in Creative Writing, Critic | 15 comments
MRTV မှ အမူအယာ
ဒီကနေ့မနက် အိပ်ယာကနိုးတော့ မနက် ၂ နာရီ …။
မိုးတွေတအားရွာနေတော့တတ်ထားတဲ့ စလောင်း ကဖွင့်မရဘူး ..
ဒါနဲ့ MRTV4ကိုဖွင့်ကြည့်ဖြစ်တယ် .။
ယာဉ်စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်တဲ့ အနှေးယာဉ် ဆိုက်ကားတွေကို ပညာပေးရိုက်ကူးထားတဲ့ပြကွက် ..။
လမ်းဗြောင်းပြန်နင်းလာတဲ့ဆိုက်ကား … ၀န်ပိုတင်လာတဲ့ဆိုက်ကား ..
အဲဒါတွေကို ယာဉ်ထိမ်းရဲအရာရှိက ဖမ်းတယ် ..။ အားလုံး ဟာသမင်းသားတွေ ဗွီဒီယို မင်းသားတွေနဲ့ ရိုက်ထားတာပါဘဲ ..။
ယာဉ်ထိမ်းရဲရဲ့ အမူအယာက လိုတာထက်ပိုပြီး တင်းမာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် .။
အကြမ်းဖက်သမားတွေကို FBI က ပစ်ခတ်ဖမ်းသလို အမူအယာဖြစ်နေတယ် ..။
ဒါနဲ့ ကျနော် တချိန်က ကိုရီးယားမှာ အလုပ်သမား သွားလုပ်တော့ PUCHON မြို့လေးကနေ ဆိုးလ်ကို ဘတ်စ်ကားစီးသွားတယ် ..။
လမ်းမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရောက်တော့ ကားရပ်ပေးရတယ် ..။ စစ်ဆေးမဲ့ရဲအရာရှိက ယာဉ်မောင်းကို တလေးတစား
အလေးပြုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျနော်တော်တော်အံ့သြသွားတယ် …။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကဆိုတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဆိုရှယ်လစ် အချိန်ပေါ့ …။
စစ်ဆေးမဲ့ရဲအရာရှိက ကားပေါ်တက်လာပြီး ကားဦးပိုင်းကနေ ပြည်သူတွေကို အလေးပြုပြန်တယ် ..။ ပြီးမှသူစစ်စရာရှိတာစစ်ဆေးတယ်။
စစ်ပြီးပြန်ဆင်းတော့လဲ တခါထပ်ပြီး အလေးပြုပြန်တယ်။ …. ကျနော့စိတ်ထဲ အတော်လေးကျေနပ်သွားမိတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာနဲ့တခြားစီကိုး … အနောက်နိုင်ငံက ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလဲ ယာဉ်စီးကမ်းဖေါက်တဲ့ကားကို ရပ်ခိုင်းပြီး
ဟဲလို … ဟိုင်း .. အိပ်စ်ကျူ့မီ .. စသဖြင့်နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ် ပြီးမှ လိုင်စင်တောင်းတယ် စည်းကမ်းဖေါက်ဖျက်ပုံကိုရှင်းပြတယ် ..။
အခု Shopping mall တွေမှာလဲ အိပ်တွေဖွင့်ရှာတော့မယ်ဆိုရင် မျက်နှာအမူအယာတွေကပြုံးနေတယ်။ ပုဂ္ဂလိကဆိုတော့ ဈေးဝယ်သူ မငြိုငြင်စေချင်တာလဲပါတာပေါ့လေ ။
ဘာပြောပြော ပြည်သူ ဆိုတာကို လေးစားတဲ့သဘောတော့တွေ့နေရပါပြီ …။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ MRTV4က ရိုက်ပြလိုက်တဲ့ ပညာပေးထဲမှာတော့ ရဲအရာရှိက မထီမဲ့မြင် ငါလုပ်ချင်တိုင်းရတယ် ဆိုတဲ့ …
ဆိုရှယ်လစ် .. စစ်အာဏာရှင် … အမူအယာတွေပါနေတယ် ..။ အမှန်တော့ ပြည်သူ့ မီဒီယာ ကြီးအနေနဲ့ အထူးဂရုပြုပြီး ပြုပြင်သင့်ပြီထင်ပါကြောင်း
၀န်ထမ်းတွေက သူတို့ကိုသူတို့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းလို့ မှမထင်ကြတာ
ဦးဖက်ပြောသလို ကျွန်တော်တို့တွေ အလေးပြုခံရမှာပေါ့
ဒီမှာက တချို့ယူနီဖောင်းတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့
ရပ်ကွက်ထဲက အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တောင်မှ အကြောင်းရှိလို့ ယူနီဖောင်းဝတ်လိုက်ရရင် မာန်တက်နေတာ
ပြီးတော့ ဘာအရစ်မှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး
ပုံမှန်ဆို ရပ်ကွက်ထဲမှာ ၁၀၉ ၁၁၀
အဲ့ဒါပြောတာလေ …လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမျိုး ရသွားတော့… လက်ခုတ်ထဲကရေလိုမျိုး … သွန်ချင်သလိုသွန် ..မှောက်ချင်သလိုမှောက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ် ၀င်သွားတာ ဖြစ်မယ် … ။ ဒီမှာက မျက်နှာတင်းချင်တဲ့ အချိန်တင်း … မတင်းချင်တဲ့အချိန်များတော့လည်း .. ကားပေါ်က စပယ်ယာ ပစ်ချတဲ့ အတန်အနှုတ်ကို ကဗျာကယာ မြေပေါ်မကျခင် ဖမ်းရတာ အမောပါပဲ … ။ နားလည်ရခက်တယ်… ။
လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမျိုး ရသွားရင် လူတွေက (အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ) မာန်တက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်
လုပ်ပိုင်ခွင့်လေးရသွားရင် အရင်ကပုံစံ အရင်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံလို့ မရတော့ဘူးလို့ ထင်နေကြတာ
စိုင်းထီးဆိုင်ကတော့ “တခါတလေ အပေါ်စီးက ဆက်ဆံမိတာ တွေးရင်း ရင်နာမဆုံးပါ” တဲ့
သူတို့က ပုံမှန်အတိုင်း ငါ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတော့ ဘယ် ပြုံးမှာလဲ
စစ် ရဲ လုံထိန်း ဆိုတာ တည်နိုင်ကာမှ တော်ကာကျမယ် လို့များ ထင်ထားသလားမှ မသိတာ
ဒေါက်တာ … ညကျလျှင် အိမ်ကို ဧည့်သည်လာမယ်တဲ့ … လိုလိုပိုပို အ၀တ်စား နည်းနည်း အသင့်ပြင်ထားပါတဲ့ …(ကျွန်မသတင်းပေး လုပ်လိုက်တာ ဟဲဟဲ .. )
နောက်တာပါ ဟဲဟဲ ။
ဦးဖက်ရေ- ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ပေးချင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ကွဲလွဲနေပေမယ့် ပိုစ့်နဲ့နွယ်ပြီး ပြောချင်တာလေးတွေ ပြောပါရစေ။
အနှေးယာဉ် (စက်ဘီး၊ ဆိုက်ကား) တွေမှာ ရောင်ပြန်ပြားတွေ မဖြစ်မနေ ကပ်ကြဖို့၊ လမ်းလျှောက်သူတွေအနေနဲ့ ကားလမ်းပြောင်းပြန်လျှောက်ဖို့ ဆိုတဲ့ ပညာပေးတာတွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ဒီကနေ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို မြင်ရတယ်ဆိုတာ အဲဒီအရာဝတ္ထုက အလင်းရောင်က မျက်စေ့ကိုလာထိတွေ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်က မျက်စိကို တိုက်ရိုက်ရောက်ရင် အရာဝတ္ထုကို မမြင်ရပါဘူး။ အထုူးသဖြင့် သဘာဝအလင်းရောင် မလုံလောက်တဲ့အချိန်မှာ ကားမီးတွေအပြန်အလှန်ထိုးကြပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ကလာတဲ့ ကားမီးထိုးတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့် ကားမောင်းသူမှာ အမြင်မှားတာတွေ၊ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နဂိုကမှ လမ်းမီးကလည်းမကောင်းရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ အနှေးယာဉ်သမားတွေ၊ လမ်းလျှောက်သူတွေအနေနဲ့ ကားမီးရောင်ကြောင့် လမ်းပေါ်မှာလင်းနေတော့ သူတို့ကို ကားမောင်းသူက မြင်လိမ့်မယ်ထင်ပြီး ပေ့ါပေ့ါဆဆ နေတဲ့အခါမှာ မတော်တဆမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။
တခါက မနက်စောစော ၅ နာရီလောက် ခရီးသွားတုန်းက သဘာဝအလင်းရောင်ကလည်း မရသေး၊ လမ်းမီးကလည်း အားမရှိ၊ မလုံလောက်၊ အဲဒီအချိန်မှာ လမ်းဘေးက စက်ဘီးတစီး ရုတ်တရက် လမ်းမပေါ်တက်ပြီး ကွေ့လိုက်လာတာ လမ်းမကြီးပေါ်ကကားမှာ မှောင်မှောင်မဲမဲထဲက စက်ဘီးကို သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရပဲ နီးမှတွေ့ပြီး မနည်းရှောင်လိုက်ရပါတယ်။ မရှောင်နိုင်လို့ တိုက်ကြပြီ ဆိုပါစို့။ ကားနဲ့ စက်ဘီး ဘယ်သူက ပိုထိခိုက်နိုင်သလဲ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်ဆိုသလို ဘာမဟုတ်တဲ့ အမှားလေးတစ်ချက်နဲ့ အများကြီး ဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်တာမို့ ဆင်ခြင်ကြစေလိုပါတယ်။ အဲဒါကို ပိုစ့်တင်ချင်လို့ ကြိုးစားနေတာ ခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီမို့ ဦးဖက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၄၀တန်တာကို ၇ကျပ်နဲ့ လဲပစ်ရသလား။ လူမိုက်..
ဦးဖက်ရေ မြန်မာကားတွေမှာ မျက်နှာအမူအယာကို လိုတာထက် ပိုလုပ်ပြ၊ ရိုက်သူကလဲ အဲဒါကိုပဲ အနီကပ်ဆွဲပြ လုပ်နေတာ ကြာပါပြီ။ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ဦဖက်ရှိတုန်း ရိုက်ကူးပေးသွားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်အပုပ်ချတဲ့ဇာတ်လမ်းဆိုရင် လူတိုင်းအော့ကျောလန်ပဲ။ အဲဒီဇာတ်ကားရိုက်ပြီး ဦးဖက်လည်း သစ်အိပ်စ်ပို့ကုမ္မဏီလုပ်တာ အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်လား…။ ယခုထက်ပို ကြီးပွားချမ်းသာပါစေ။
အကြောင်းဆိုလဲမကောင်းရင်မကောင်သလို၊ ကောင်းရင်ကောင်းသလိုေ၇းတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေအကြောင်းဆို
လဲဒီလိုဘဲ လာဘ်စားရင်စားသလိုလာဘ်ပေးရင်လောဘ်ပေးသလိုရေးနေကြတာ။ ဒီထဲကရွာသားတွေထဲမှာ
လူတိုင်းနီးပါး ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားရင်ပေါ့လေ ဒီကိစ္စတွေကအခုမှမဟုတ်ပါဘူး
ခေတ်အဆက်ဆက်ဖြစ်လာခဲ့ကြတာ ပြောတော့လဲအပိုပဲ စိတ်ဓါတ်တွေမှမပြင်နိုင်ကြသေးတာ
မျက်နှာလွဲခဲပစ် လုပ်တတ်ကြတာ ဝေဖန်သူအမောပဲအဖတ်တင်ရုံရှိမှာ
ကိုရင် ကိုးရီးယားသွားတုန်းက စည်းကမ်းဖေါက်တာ ကိုရင်တစ်ယောက်လောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဒီမှာက ကိုရင်အပါအဝင် ကျွန်တော် ကိုလျှာရှည်အပါအဝင် အများကြီး အများကြီး စည်းကမ်ဖေါက်နေကြတယ်လေ၊ မယုံရင် ရွှေမန္တလေးက လမ်းဆုံလမ်းခွ (မီးပွိုင့်တွေ) မှာတစ်ရက်လောက် စောင့်ကြည့်ပါလား၊ ကိုရင် ဆိုရင် မျက်နှာထားတင်းရုံလောက်နဲ့လုံလောက်ပါ့မလား၊ ကိုလျှာရှည် တော့ စိတ်ရှိတိုင်းပြောရရင် စတင်းဂမ်းနဲ့ထိုင်ဆွဲခြင်တာ(တောင်ပြုံးပွဲကဝယ်လာခဲ့တယ်)၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တွေ့နေရတာစိတ်ပျက်စရာ၊ စည်းကမ်းဆိုလာ ကြောက်မှ လိုက်နာရမှာလား၊ အများအတွက် စံသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို မိမိအသိနဲ့ လိုက်နာကြရမှာလား၊
ယူအက်စ်ရောက်ပြီးမှ.. ရဲတော့ တခါမှအဖမ်းမခံရဘူးဖူး…။ ရဲတွေနဲ့စကားတော့ တခါတလေ..ပြောဖြစ်ပါတယ်..။
သူတို့ခမျာ..Sir! Sir! နဲ့..။
ကျုပ်ကလည်း..Sir! Sir! နဲ့..။ ရီတော့ရီစရာ..။
မြန်မာပြည်နဲ့ပါတ်သက်လို့… ထင်တာဝင်ပြောရရင်.. အပေါ်က ပန်ပန်ပြောသွားတဲ့ ယူနီဖေါင်းအရှိန်ကတော်တော်ပါတယ်ထင်မိတယ်..။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့.. သဘာဝကိုက.. အရောင်အသွေးနဲ့..ယူနီဖေါင်းကိုးကွယ်တာမျီုးဖြစ်အောင်သင်ကြားခံထားရတာမို့လည်း ပါတယ်ထင်မိတယ်.။
ဥပမာပေါ့.. အ၀ါရောင်သင်္ကန်းခြုံထားရင်.. လက်အုပ်ချီပြီးသား..။
အစိမ်းေ၇ာင် ယူနီဖေါင်းဆို… ဒူးကညွတ်ပြီးသား.. ဖြစ်နေတာကိုး…။
အပြာရောင်(ရဲ) ယူနီဖေါင်းဆို.. လန့်နေပြီးသား..။ စသဖြင့်ပေါ့..။
အဓိကက.. ကိုးကွယ်ရာ..အယူမှားက လာတယ် တွေးမိတာပဲ..။
သဂျီးရေ.. ဒိုင်းညွန့် ဒိုင်းညွန့်.. ဒုံးဒုံး… ဂဒက် ဂဒက်… ဒက်ဒက်ဒက်… ဒူ….
ဟိဟိ.. သေနပ် မပါလည်း အဲလို လုပ်လို့ ရပါတယ်။
သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇတ်မှ တော်ကာကျမယ်။
သူနည်း သူဟန်နဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဟောက်စား လုပ်တတ်ကြတယ်။
ကား အကောင်းစားနဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ စည်းကမ်းဖောက်မိတယ် အတားခံရတယ် လိုင်စင်တောင်းတယ်။
ကျမ အဘ သမီးပါ. အဘတူမ ပါ.. အဲလိုလေး ပြောပြီး မုန့်ဖိုးလေး ဆင်တကောင်ပေးလိုက်ရင်..
ဟာ မမ.. လေးစားပါတယ်။
အိမ်နားက လူကြီးတွေ အားလုံးကို အဘ ခေါ်တာ အကျင့်ပါနေလို့.. အဟိ..
တခါတုန်းကကျုံးဘေးမှာဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ သွားတုန်းဖမ်းခံ၇တာအိမ်နားကရဲမှူးနာမည်ပြောပြီးခပ်တည်တည်လုပ်လိုက်တာ…ဟာဟုတ်ကဲ့သွားလို့ ရပြီခင်ဗျာတဲ့
ဒီတခါလဲမန်းလေးပြန်တုန်းကဘုန်းကြီးကျောင်းကအပြန်နန်းရှေ့ အသွားမှာကျုံးဘေးမှာမရောက်တာကြာလို့ သွားလိုက်ပါတယ်ဖမ်းခံထိပါလေရော…ဒါနဲ့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ဆရာရယ်ပိုက်ဆံမပါလာလို့ ပါဘုန်းကြီးကျောင်းကပြန်လာတာပါလို့ ပြောပြီးနှစ်ထောင်ပေးလိုက်ရော သွားသွားဟိုဘက်လမ်းကပတ်သွားနော်တဲ့အကြံပေးလိုက်သေးတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေက သူ့ နေရာနဲ့ သူ ဟောက်စားတွေချည်းပဲ ။ အစိုးရဘဏ်မှာ ငွေသွားလွှဲတာတောင် အဟောက်မလွတ်ဘူး